Maafiyada Talyaaniga Ayey Xidhiidh Leeyihiin – Rasaasa News
Maafiyada Talyaaniga Ayey Xidhiidh Leeyihiin
Nov 9, 2011 Maafiyada Talyaaniga ayey Xidhiidh la Leeyihiin
Nairobi, November 9, 2011 [ras] – Dhalinyarada Oohinta Qarsoon, ayaa yidhi “Jwxo-shiil, wuxuu xidhiidh la leeyahay Maafiyada ka jirta dalka Talyaaniga” mar ay waraysi siinayeen warbaahinta ESTV oo laga leeyahay degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa filayaa in dad badan oo taageeri jiray Jwxo-shiil iyo kooxdiisa lagu sheegay Maafiyada ee haatan dabar go,oday in ay rumaysanayaan waxayaabo badan oo hore looga sheegay, oo ayna awal hore dhag jalaqa u siin jirin.
Dhalinta Oohinta Qarsoon, oo hore fara caaradood kaga baxsaday dil ay la damacsanayd kooxda Jwxo-shiil, ayaa deeqo u qaybiyey caruur agoona oo waalidkood ay dishay kooxda Jwxo-shiil, oo ku jira xarun ku taal Jijiga.
warbaahinta rasaasa.com iyo xaajo media oo ahaa saxaafadii ugu horeeyay ee fahmay nidaamka ay isticmaasho kooxda Jwxo-shiil, ayaa in badan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ugu qaylo dhaamiyey War Iska jiraay!
Waa Eebe Wayne mahadii mar hadii ayna dadweynaha Somalida Ethiopia u baahnayn in wax looga sheego kooxda Jwxo-shiil, oo ay iyagu maanta doonayaan in ay ka gudaan dunuubta ay ka gashay.
Dr. M S Dolal, oo ahaa ruuxii ugu hor fahmay Jwxo-shiil, ayaa in badan damcay in ay dadku fahmaan waxa dhabta ah ee jira. Waxaana loogu jawaabi jiray war wadaadka maskiinka ah iska dhaaf, kolkaas ayuu odhan jiray “waxa ay dadku moodi Maxamed Cumar Cismaan iyo waxa uu yahay waa kala laba.”
Dhalinyaradan Oohinta Qarsoon, ayaa ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee saxaafada hor fadhiista iyaga oo sheegaya wax walba oo ka dhex jira kooxda ay Maafiyada ku sheegeen. Waxaan jeclaan lahaa in ay waa hore wax fahmi lahaayeen, taas oo baajin lahayd dad badan oo maanta aakhiro jira.
Waxay ka jawaabeen kooxda Oohinta Qarsoon su,aal aan Jawaab loo la,aa oo ahayd Dr. Dolal, Diirane iyo Maadeey waxay ahaayeen isku aragti, maxaa keenay in ay hal mar bareega uga boodaan saaxiibkood oo ay maraan dhinaca Jwxo-shiil? Jawaabtu waxay ahayd lacag la siiyey labada nin lacagtaas oo dhanayd midkiiba $60, 000.
Bahda rasaasa.com, waxay aad ugu faraxsan tahay in dhalinta Oohinta Qarsoon in ay magaalada Jijiga u qaybiyaan qalabyo kala duwan caruurta ay waalidkood dishay kooxda Jwxo-shiil, ee iyadu mudo ka bayacmushtaraysay dhiiga dadka.
Taariikhdu cafiyi mayso Jwxo-shiil iyo afarta xubnood ee dhiiga dhiiga dadka ka bayacmushatarayey mudada dheer.
Saddex ka Mid ah Ciidamada Ethiopia oo Lagu Dhaawacay Bali-dhiig
Masuuliyiinta Maamulka Somaliland oo u Dhaaraan Dhigtay Afxumada Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia iyo Dadweynaheeda